केपी ओलीले इँटा चैं राख्नु राख्नुभो होला तर बनाएको चाँहि होइन “:पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल – Khabar Patrika Np
केपी ओलीले इँटा चैं राख्नु राख्नुभो होला तर बनाएको चाँहि होइन “:पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १२, २०७८ समय: २३:३७:४०
गत पुस १४ गते काठमाडौंमा आयोजित आमसभामा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ‘धरहरा र रानीपोखरी केपी ओलीले बनाएको होइन’ भन्दै भाषण गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बन्यो । टिकटकमा मानिसले रमाइलो गरे ।
संसद विघटनविरोधी आन्दोलनमा भाषण गर्दा एमाले बरिष्ठ नेता खनालले धरहरा र रानीपोखरीबारे दिएको प्रतिक्रिया यस्तो थियो –
‘के केपी ओलीले रानीपोखरी बनाको हो ? त्यो त कालीगढहरुले बनाए नि । धरहरा केपी ओलीले बनाको हो ? केपी ओलीको पालामा बन्यो होला ।
तर, त्यो त सिकर्मीहरूले बनाए । कालिगढहरुले बनाए । इञ्जिनियरहरुले बनाए । वहाँहरुलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ । निक्कै चाँडै बनाए उनीहरुले ।’
अन्ततः अहिले रानीपोखरीपछि धरहरा ठडिएको छ । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले धरहराको उदघाटन गरिसकेका छन् । यद्यपि सबै संरचनाहरु बनिसक्न बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणका लागि भने खुलिसकेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा धरहरा बनेको जस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई उनले पुसमा गरेको धरहरासम्बन्धी भाषण सम्झायौं ।
खनाललाई हामीले सोध्यौं, ‘यहाँले गर्नुभएको भाषणको ट्रोल बनेको तपाईले थाहा पाउनुभयो कि भएन ? थाहा पाउनुभयो भने यसबाट तपाईलाई कस्तो अनुभूति भयो ? त्यसबेला धरहरा र रानीपोखरीबारे तपाईले खासमा के भन्न खोज्नुभएको थियो ?’
​पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो पुरानै भनाइप्रति अडान दोहोर्‍याउँदै धरहरा र रानीपोखरी निर्माणबारे आफ्नो दृष्टिकोण यसरी प्रष्ट्याए–
कहिलेकाहिँ हामीले बोलेका कुराहरुलाई कतिपय मिडियाहरुले बङ्ग्याउने टिंग्याउने भाचँभुच पार्ने र आफ्नै ढंगले त्यसलाई प्रयोग गर्ने कामहरु गर्छन्, ठीक त्यस्तै भएको हो त्यो ।
म अहिले पनि भन्छु, धरहरा… केपी ओलीले इँटा चैं राख्नु भो कि राख्नुभएन ! शिलान्यास गर्दा राख्नुभो होला । त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै इँटा उहाँले राख्नुभएको छ त ? छैन नि । उहाँको कार्यकालमा बन्यो । हो, नाक फुलाउने कुरा यतिमात्र हो ।
यस्ता पुनर्निर्माणका कामहरु सबै नै स्थायी सरकारले गरिरहने कुरा हो । त्यहाँ केपी ओली नभएर अर्को कुनै ओली भएको भए पनि यो धरहरा बन्थ्यो । केपी ओलीकै कारणले धरहरा बन्यो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । केपी ओलीकै कारणले रानीपोखरी बन्यो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
त्यो काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको योजनाअनुसार बनेको छ । त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण भन्ने हामीले बनाएका छौं, त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिवले मलाई हिजोमात्रै फोन गरेर यसको उदघाटन गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं भनेर सूचना गर्नुभएको थियो । बनाएको त त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हो नि । अब जस पो केपी ओली आफैं लिँदै हुनुहुन्छ । यो जस उहाँले एकलौटी नगरेपनि हुन्छ ।
​यो साँच्चि नै त्यहाँका सारा कालिगढहरुले, स्थानीय सरकार, अनि सारा प्राविधिकहरु, सारा ईन्जिनियरहरु, त्यो अवधारणा निर्माण गर्ने अध्येताहरु सबैले बनेको सामुहिक फल हो । यसकारणले त्यस्ता कुराहरुका बारेमा कसैले पनि प्रशस्ती लिन कोशिस गर्नुहुँदैन । यो कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरेजस्तै हो ।
राजाका पालामा जे–जे बने, सबै राजाले बनाए भन्दै हिँडे नि, यो त्यस्तै होे । त्यस्तो हुनुहुँदैन । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पार्टीको कुनै नेता हुन्छ, अनि सबै कुराहरु उसको कार्यकालमा बनेका चिजहरु उसले बनाएको हुन्छ त ? हुँदैन । तर, जस कहिलेकाँही जुन व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको हुन्छ, त्यो व्यक्तिको कालखण्डमा बन्यो भने हुन्छ ।
वास्तविक अवधारणा भन्ने हो भने त रानीपोखरीको अवधारणा प्रताप मल्लकी रानीले बनाएको हो । त्यो अवधारणाबाट विकसित भयो । एउटा सम्झनामा केही बनाइदेऊ, मलाई साह्रै शोक लाग्यो छोराको भनेपछि सम्झनामा के बनाउने भनेर सल्लाह गर्दा रानीलाई त्यतिबेलाका कालिगढहरुले यस्तो बनाऔं भनेर सुझाव दिए, त्यसपछाडि रानीपोखरी खडा भयो ।त्यसरी नै भीमसेन थापाले धरहरा बनाएको हो, त्यो अवधारणा त त्यतिबेला आएको हो ।